Kuuraya kaviri kwaGina naMarinus muPathé cinema Groningen: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 27 October 2019	• 24 Comments
"Ini ndanyatso kuvhunduka. Icho chimwe chinhu chakadaro chinoitika mune cinema, iyo nzvimbo iyo munhu wese dzimwe nguva anogara kuti atarise bhaisikopo. Izvi zvakashama.Ndiko kwakaitika kugavhuna wedhorobha Marjet Woldhuis wedare remakurukota 100% Groningen. Uye iyo zvakare iyo yekuvhundutsa mhedzisiro inodikanwa kuti tikwanise kuita mutemo mutsva kana isu tiri zvakare kubata neI PsyOp inotevera. Zvirokwazvo izvo hazvigone kutaurwa; haugone kana kufunga nezvazvo. Izvo zvinotyisa kune vakafirwa uye neye troll uto (iyo inocherekedza nhaurwa yenhau yehurukuro) ichazvikanda pauri. Asi muchizvarwa chino chehunyanzvi hwekuita zvinhu zvakadzama, isu tinofanirwa kuvimba kuti hatisi kuridzwa nenyika nevezvenhau kuburitsa mutemo waisazombogamuchirwa.
Nguva yadarika pakanga paine kutaura kwemitemo uko vanhu vaigona kuvharwa pasina kupindira kwemutongi kana chiremba wepfungwa. Chikumbiro kubva pane ino saiti uye zvimwe zvinopesana kubva munharaunda panguva yakaita iro repiri chipinda chevatambi chinodyidzana Bill kubva Edith Schippers. Nguva yakanga isati yaibva yeiyo. Vanhu vakatanga vaona zvakakosha. Kana iyo Ruinerwold 'spooky mhuri' yakatungamira kubviswa kwechikumbaridzo kuti ugone kutarisa kumashure kwemusuwo wese wepamberi uye sevavakidzani kana shamwari munguva pfupi. the psycholance vanobvumidzwa kufona uye bhiri iri rinogamuchirwawo, munhu wese anogona kupedzisira apinda muchirongwa cheGGZ uye haasati adzoka. Nekuti ipapo iwe unogona kukandirwa mune yega cell isina chero ivhu rekutarisa uye iwe unowana mumwe mushonga wekucherechedzwa kuti uone kana iwe uchizopenga.
"Ehe, asi Vrijland. Uku kuuraya chaiko kwakaitika. Ndinoziva vanhu vanogara pedyo.","Ini ndaiziva vanhu vacho ndega","Ndine shamwari dzaigara padyo navo","Ndoziva vanhu vaive shamwari yavo","Ini ndoziva mhuri","kune zvakawanda zvekunyaradza","kana zvikadaro uyai kumariro pachako, ipapo uchazviona","Ini ndinoziva muridzi wekambani","zvinotsamwisa hama!","Ndinoziva kuti Mr. Ergün aripo zvechokwadiUye saka kuchave nemhinduro dzakawanda. Izvo zvinogona kuve zvechokwadi, asi ikozvino zvatinoziva nezve kuvapo kwemakadzika uye isu tinoziva kuti zvemagariro enhau zvakare anotariswa nevano pindura vanopindura, isu hatichaziva chokwadi. Zvakare, ivo vanoratidzira vanogona kunge vakapihwa bhegi remari uye vaine chitambi chitsva muArgentina, asi izvo parutivi. Kwakadzika kunogona kuita chero hunhu, kusanganisira hwese nhoroondo, kuitike sezvazviri (verenga tarira kuti izvo zvinoshanda sei. Iwe unogona zvakare kushanda pamwe neatambi semuiti, saka hauzive. Iwe haugone kuzvitaura. Zvese zvatinoziva, tinozviziva kuburikidza nemidhiya nenhau dzemagariro. Nehunyanzvi, zvinokwanisika kuisa PsyOps pamwe uye kana iwe uchikwanisa kuishandisa kuunza mutemo iyo yaisazombogamuchirwa kugamuchirwa, waita chinangwa chako.
Iyi nyaya inogona kungoendesa nyore nyore kumugamuchiro wekutora chero wakaoma kufunga kana chero iye asingashande pamwe nenyika. Wobva waisa hwaro hwecolcist mapurisa ejasi rakapfeka makushe ehupfu: mhumhi mune chipfeko chemakwai.
Tatojairwa kumapurisa kutikumbira chiratidzo chedu. Izvo zvakaitika zvakare pasi peiyo '40 /' 45 kutonga. Ndinoyeuka imwe nguva apo iwe waingogona kufamba mumugwagwa usina pasipoti kana ID uye hapana kana munhu akambobvunza nezvazvo. Kwete, kamwe, kwete kwemakore! Yakanga ichingova nyaya isipo -; chimwe chinhu chakapusa. Hauna kana kutakura pasipoti kana ID newe. Vechidiki vanhasi vanoshandiswa kuve ne ID yavo nguva dzose muhomwe yavo, nekuda kwemarudzi ese emitemo aivimbisa. Ziva paunenge uchitengesa zvinwiwa, kana uchipinda mu disco uye dzimwe nyaya dzakawanda. Uye isu tinofunga kuti zvakajairika, nekuti kwaimbove nematambudziko aikonzera kuiswa kweiyo basa. Uye ndizvo chaizvo zvatinoona. Mukuvhiya kwepfungwa (PsyOp), dambudziko rekukanganisa kukuru kwemagariro rinogara rakagadzirwa, ipapo mhinduro yacho inokonzereswa (kuburikidza nehurongwa hweTerevhizheni hwakadai saPauw uye nhaurwa yenhau dzemagariro) uye ipapo mhinduro yacho inopihwa. Icho chinogara chiri chitsva chakasimba mutemo: mamwe mapurisa mamiriro.
Munguva pfupi iri kutevera, kwete chete kuratidza ID yako imhosva, asi unogona zvakare kubvisirwa mumba mako usingakanganwirwi uye pasina kupa chero chikonzero. Ipapo iwe unogona kupedzisira wave mukamuri yeGGZ isina mahwindo uye iwe unogona kupihwa mushonga unoita kuti unzwe kusuwa. Kana, mushure memaawa mashoma, iwe wanga wakagara mukamuri iro risina mahwindo uye ukatanga kuratidza humwe hunhu husina kunaka (semuenzaniso, iwe unobva wave claustrophobic), zvinogona kureva kuti zvechokwadi uchaenda muGGZ mall mill. Hapana jongwe rinorira pairi. Uye iwe wagamuchira mutemo wese uyo wakagonesa, nekuti waidikanwa kwazvo; yekuuraya kwaPathé, kwaAnne Faber, kwaRuinerwold, kwe,,,. Inotaridza kunge movie rinotyisa nzvimbo iyo munhu wese dzimwe nguva anogara kuti atarise bhaisikopo.
Isu tinobheja kuti iwe unofungawo muvhidhiyo iri pazasi: "Iye murume anofanira kunge akafanirwa nazvo, anofanira kunge airatidza maitiro ekufungidzira" Iwe uri uye anowedzera uye achaunzwa mukugamuchirwa maitiro eiyo intrusive mapurisa yenyika.
Zvakanyanya kutonyorwa pamusoro peTurumhow of daily 'reality'
Tags: mashoko ekunyaradza, Featured, firimu, gereageerd, shocked, Gina, Groningen, Marinus, vezvenhau, kuuraya, Pathe, psyop, mumagariro
Hongu, aive 33 makore ...
Nhamba 33 inongedzera kune yakavanzika magariro ayo vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, kururamisira, mutemo uye midhiya vari chikamu.
Ndivo vanochengeta Trumanshow: Icho chokwadi sezvaunozviona.
Pfungwa iwe..zvezve bhaisikopo rakanyorwa mune ino nyaya yekusungwa nemapurisa muMichigan mushure mekusaratidza ID, inogona kungoiswa kuti vatambi vajairike kumapurisa uye kukutyisidzira iwe kuti usungwe kana ukasashanda .
Muenzaniso wakanaka we more and more intrusive state state, sezvatiri kuwedzera kuona muNetherlands. Iwe uchagamuchira mutemo wese uyo unodiwa kune izvi, nekuti iwe upofu unotora 'matambudziko ehukama hwemagariro' kubva munhau.
Huwandu hwevanhu hunoratidzika kuva hwakagadzirira kukangamwirwa kusungwa kwevanogona "kuvhiringidzika vanhu" (izvo zvingave zvinyorwa kune anenge wese ... mune yaimbova Soviet Union yainzi vapikisi)
Ini ndinofunga kuti hunhu hwaEggnn S hwakavakirwa paKramer kubva Seinfeld 😉
Kramer aive futi murume akavhiringika ..
"Mukadzi uyu, murume wake akagamuchirwa muchipatara, anorondedzera vavakidzani vacho seakanaka pachawo. "Kunyanya 'kurarama uye kurega kurarama' pano. Hapana kunetsekana nemumwe uye kana makuhwa pamusoro peumwe neumwe. Pese pamusha ivo vane chidimbu chevhu chavo uye unogara imomo kunyanya. "Kune vanhu vakaurayiwa, zvakangofanana zvakaitwa."
Ehe hongu .. saka vavakidzani havana kunyatsovaziva .. kana chaizvo kwete ..
Zvakanaka iwe hauzive, unodaro here?
Izvo zvinokurumidza uye zviri nyore kuziva .. kana uchida kuzviona! Martin, ndanga ndichikutevera kwenguva yakareba, kubvira panguva yawakandiratidza chimiro chaMika Kat, ndinokuremekedza zvakanyanya uye ndakadzidza zvakawanda kubva kwauri! Kutenda
Achashanda seiko John de Mol kuverenga neizvi? Zvino vavakidzani vanoerekana vanyatsoziva vakakuvadzwa chaizvo?!
Ona kubva paminiti 9: 09…
Kugadzirwa kwakadaro kwehupenyu mune sinema ... yakanaka
3.33 maminetsi, haina kuwana chero nyangadzi Sand.
De Telegraaf ndiyo girazi renyika uye enceclopedia, zuva rega rega,
De Telegraaf anoziva ZVESE ZVESE? nguva dzose! pakarepo!
Super Columbo's, Sherlock Holmes ivo ipapo.
Vanoziva ivo vaive ma cleaners muiyo sinema.
Ivo vanoziva kubva kuvana veSpook (muDrente) kuti vakadzidza zvakanyanya uye telegraaf ndiyo yega inogona kuverenga facebook yezvinyorwa zvevana. (vhura chinongedzo pazasi pamwe neye inconcito modes)
asi usakanganwe Amsterdam, Hugo de Groot mraba.
Johny van de H uye welly uye Schoolenberg vane iyo dhaimani bhora risina mumwe munhu, ivo ndiAgatha Christie rudzi rwepasi, nhoroondo yese ivo vanoziva pakarepo. (izvo zvirokwazvo zvinoreva kuti kuva vanotsigira)
Ndiri kuda kubheja rongedza mukaka, tumira Johny van de H kuenda neketi yemukaka, uye anodzoka aine bhodhoro re coke, rangove mune mhuka. Zvimwe Matthijs N angangodzoka aine matanhatu-pack yemafrancis, saka angadai akaitira zvakanakira iye.
De Telegraaf inogara ichiziva Zvese mukati memaawa mashoma! zvakanaka,
Ndinogona kuwedzera kune rangu runyorwa: iyo kodzero yekuramba kubvumirwa kuchipatara chepfungwa pasina kadhi redare inofanirwa kuchengetedzwa.
Iyo kodzero yekuramba mushonga inofanira kugara ichishanda zvisinei nekuti mutongi anofungei.
(kwepanyama uye kwepfungwa kuzvisarudzira)
Ndiri kuda kuziva kuti vangani kodzero dzeiyi rondedzero pamusoro pemakore 10 ichiri kushanda, yakanaka chiratidzo chechizvino mamiriro ezvinhu munharaunda.
Iyo AD inoti: "GGZ yaida kumanikidza mhondi dzeanema sinema kurapwa". Senge ini ndakati: "Dambudziko, Reaction, Solution" takananga kuEdith Schippers bhiri kubva kuhurumende yapfuura. PsyOp?
N. Leeman akanyora kuti:
Maitiro akakodzera akatopihwa nemutemo weanopa. Humambo hwemuviri hunopedzwa zviri pamutemo.
Kumanikidza vaccination parizvino muvhiki ... uye rondedzero yechido haina kana kupedza.
Kuenzana ff chipping, uye wapedza.
ZVINONYANYA KUKOSHA ZVINOGONESA, Zvekuita Copy Wawakamboona!,
Chinyorwa cheblogger (Martin Vrijland pano) chakatotiratidza zvakawanda kuti chiitiko chacho chaicho
haina kuvimbika uye izvozvo zvinosimbiswa ne disinfo yakabatana na
kusiira akakosha akasiyana echokwadi.
Marinus haana surname here?
uye nei Gina asina zita rekupedzisira? asi zera
Mwanakomana haana kudzidziswa kuKorea here?
uye mwanasikana futi?
Sei rwendo runyararo ruite sounosekesa, zvinoita senge, zvakakoshawo pakugadzirisa.
Nei zvese zvese zvichizivikanwa nezvemupambi uye zvakapusa chero chinhu nezvevakabatwa, hazvigoneke
Vanhu vanoshushikana? zvinoenderana nechinyorwa chiri pazasi (batanidza) maererano nemuvakidzani, unoti chii muvakidzani, ndi goddamn HORRIBLE kana chiri chokwadi, chii chakashatiswa, unoshamiswa kana tsvina ikadya sosi kubva pancake yako, asi iwe unokatyamadzwa nazvo Chiitiko chinotyisa.
Sober Groninger inoita kuti izwi rako rinzwiwe, rinhuwa!
Kanganwa kuti nei, iwe uchishamisika, hapana mudiwa
Mufananidzo wevaviri kuchenesa Marinus & Gina muBios van Pathee muGroningen….
Zvakanaka uye mimwe mibvunzo yakawanda iyo yakavhurika
Zvakanaka, hama-mukwasha wangu maneja mune iyo sinema uye yaive shamwari nevaroora.
Ini ndichabvunza kana iye achifunga kuti ndeye psy-op kana kwete.
Hakuonekwe nguva pamhenderekedzo. Kwaziwai!
Ko hama-yako anonzi ani, ndobva ndamufonera? Uye iwe wanga usati wabvunza here kuti panguva yakaitika Adje?
Saka unoziva kuti aive shamwari nevaviri ava, asi hausati wataura naye nezvazvo zvakadaro?
Unoziva sei kuti aive shamwari nevaroora?
Uye kana ivo varipo uye aive shamwari navo (izvo, mumaonero angu, zvakatopatsanurwa, nekuti kazhinji mamaneja haasi shamwari zvakananga nevachenesi), saka zvichiri kugona kuti iri PsyOp.
Adje zvimwe rat?
Ini ndangobuda uye ndisingazive 'Adje', chero zvataurwa zvakapfuura hazvisati zvaonekwa.Hazvigone kuti ndiye mumwe wevakomana vevanyori kana anoita seanoshandira wevakomana vevanyori, vanorangana uye vanyengeri . Ivo vakanaka kwazvo pane izvozvo nekuti vanhu vazhinji vanomedza zvese.
NyowaniWind akanyora kuti:
Chokwadi kana chenhema ... psy-op kana kwete
"Usamborega dambudziko rakanaka-rekutambisa"
Kwete yangu quote .... Asi zvese zvataurwa nazvo.
Sezvineiwo; nemaune kusadzivirira uye / kana kufambisa kwakafanana nekuita!
« Nhema mireza yekurwisa London, Manchester, Paris, Barcelona uye Rotterdam pa 23 uye 24 Gumiguru? (UPDATE))
Iri gomba rakatorwa mifananidzo neNASA zvechokwadi iplasma plasmid »
Total Visits: 13.761.601